घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू माइकल ओबाफेमी बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो माइकल ओबाफेमीको जीवनीले तपाईको बाल्यावस्थाको कहानी, पारिवारिक जीवन, अभिभावक, प्रेम जीवन (प्रेमिका र पत्नी), जीवनशैली, नेटवर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा जानकारी दिन्छ। संक्षेपमा, हामी तपाईंलाई उनको जीवन कहानी को एक पूरा तस्वीर प्रदान, आफ्नो शुरुआती वर्षहरु देखि शुरू हुँदा देखि उहाँ प्रसिद्ध भयो।
हो, सबैलाई थाहा छ उसको माइकल ओबाफेमीको परिवारको नाम सम्झिन्छ Obafemi Martins- त्यो नाइजेरियाको अगाडि गर्जनको गतिको लागि परिचित छ। यद्यपि धेरैले माइकल ओबाफेमीको जीवनी पढेका छैनन् जसले उनीबारे धेरै कुरा प्रकट गर्दछ। अब, थप एडो बिना सुरु गरौं।
माइकल ओबाफेमी बाल्यकाल कहानी:
जीवनी शुरुवातकर्ताहरूको लागि उनी उपनाम "मीका" हुन्। माइकल ओलुवादुरुतिमी ओबाफेमीवास जुलाई २००० को the औं दिनमा आयरल्याण्डको राजधानी डब्लिनमा जन्म भएको थियो। आयरिश फुटबलर उनको आमा सुश्री बोलाजोको ओरेडिन र एक सानो ज्ञात बुबामा जन्मेका थिए।
माइकल ओबाफेमी परिवार मूल:
सबैभन्दा पहिला, स्ट्राइकर आयरल्यान्डको बोनफाइड नागरिक हो। यद्यपि माइकल ओबाफेमी परिवारको उत्पत्ति निर्धारण गर्न गरिएको अनुसन्धानको नतीजाले उनी योरूबा जातिको हो भनेर संकेत गर्दछ।
यो जातीय समूहले पश्चिमी नाइजेरियाको अधिकांश भागमा प्रभुत्व जमाउँछ। निहित द्वारा, माइकल ओबाफेमीका अभिभावक अफ्रिकी र नाइजेरियाली जराका हुन्। फुटबलर आफैंमा आयरिश हो र नाइजेरियाको रगत यसको नसाबाट बगिरहेको छ।
माइकल ओबाफेमी बढ्दो वर्ष:
के तपाईंलाई थाहा छ फुटबल प्रतिभा अझै सानै छ जब उसको बुबा र आमा इ England्ल्याण्ड जानुभयो? यो त्यो देशमा थियो जुन4बर्षे ओबाफेमीले आफ्नो जेठो भाई अफोलाबी ओबाफेमीसँग फुटबल खेल्न शुरू गरे।
“हामी कंक्रीटमा नियमित रूपमा घरको बाहिर फुटबल खेल्थ्यौं। हाम्रो अभ्यासमा छिमेकीको बारमा लात हान्ने सामिल छन् जब सम्म हामी आफैंले बोल्न पाउँदैनौं, "
फुटबलमा उसको शुरुवातको स्ट्राइकर नोट गर्दछ।
माइकल ओबाफेमी परिवार पृष्ठभूमि:
सत्य यो हो कि ऊ एक धनी परिवारबाट नभएर मध्यम-वर्गबाट ​​आएको थियो। इ England्ल्याण्डमा हुँदा, माइकल ओबाफेमीका आमाबुवाहरूले चिंगफोर्डमा निवास गरे। क्षेत्र पूर्व पूर्वी लन्डनमा एक उपनगरीय जिल्ला हो। माइकल ओबाफेमीका बुबा र आमाले निश्चित गरे कि उनलाई राम्रो हेरचाह गरिएको थियो। तसर्थ, ऊ उत्तर पूर्वी लन्डन छिमेकमा प्राय जसो बच्चाहरू जस्तै खुसी भए।
माइकल ओबाफेमीको लागि कसरी क्यारियर फुटबल शुरू भयो:
जब समय सहि थियो, फुटबल उत्साहीको नियतिले कल गर्न थाले। त्यस बेला, माइकल ओबाफेमीका अभिभावकहरूले उनको जोशलाई एक उत्पादक दिशा दिन आवश्यक ठान्थे। त्यस्तै, उनीहरूले बालुवांग क्लब - चिनफोर्डमा रायन एफसीमा प्रशिक्षणको लागि उनको भर्ना देखे।
माइकल ओबाफेमी शुरुआती वर्षहरू चेल्सी, आर्सेनल र वाटफोर्डसँग:
चिंगफोर्डमा युवाको विकास यति चाँडो भयो कि उनले आफ्नो क्यारियर निर्माणका अन्य अवधिहरू विभिन्न फुटबल एकेडेमीहरूमा खर्च गरे। एकेडेमीहरुमा चेल्सी, आर्सेनल र वाटफोर्ड सामेल छन्।
माइकल ओबाफेमी बचपन कहानी- उनीसँग फुटबल एकेडेमीहरूको क्यारियर निर्माण थियो। ।: Twimg।
वाटफोर्डमा ओबाफेमीको युवा क्यारियरको शिखरमा, फुटबलरले एकल खेलमा ११ पटक नेटको पछाडि भेट्टाएको छ। त्यस पछि, उसलाई १ by वर्षको कान्छो उमेरमा क्लबले छोडिदियो।
माइकल ओबाफेमी बायोग्राफी - कहानी ख्याति कथा:
वाटफोर्डबाट फुटबलको विद्रोहको रिलीज पछि, उसले वास्तवमै क्यारियर खेलको रूपमा फुटबल चाहान्थे कि सक्दैनन् भन्ने कुरा प्रतिबिम्बित गर्न ठूलो खेलबाट एक वर्ष लिए। उनले फुटबल राम्ररी राम्रोसँग चलेन भने क्यारियर पथका धेरै संख्याका बारे सोच्न पनि सक्छन्। उनीहरू जत्तिकै मायालु छन, माइकल ओबाफेमीका अभिभावकहरू उनको जीवनको त्यो कठिन समयमा उनलाई सान्त्वना दिन आएका थिए।
आफ्नो निर्णय गरे पछि, १ 15 वर्षीया उनको आमा संग बस्नुभयो भविष्यको लागि आफ्नो योजनाहरु साझा गर्न। ओबाफेमीकी आमाले उनलाई पूर्ण समर्थन दिए, खेलमा उनको १००% प्रयास गर्न आग्रह गरे। अभिभावकीय सल्लाहलाई धन्यवाद, आयरिश फुटबलर आफ्नो पुरानो शौकमा फर्किए।
माइकल ओबाफेमी LifeStory - प्रसिद्धि गर्न को लागी:
यो लामो समय भएको थिएन जब फुटबल उताविनी २०१ 2015 मा एक वर्षको लागि लेटन ओरिएन्टमा सामेल भयो। पछि उनले २०१ 2016 मा साउथेम्प्टनका लागि हस्ताक्षर गरे। उनी सन् १ – January ot मा टोटेनहम हटस्पुरको साथ १ draw१ को बर्षको बर्ष जनवरीमा सन्तहरूको लागि व्यवसायिक डेब्यू गर्न गए।
डेब्यूको साथ, ओबाफेमी दोस्रो कान्छो खेलाडी भए जो साउथेम्प्टन पछि प्रीमियर लिगमा उपस्थित भए। ल्यूक श (१ years बर्ष र ११17 दिन पुरानो)। महिना पछि डिसेम्बर २०१ in मा, हडर्सफील्डमा सन्तहरूको लागि –-१को जीतमा पहिलो गोल गरेपछि ओबाफेमी प्रीमियर लिगमा साउथेम्प्टनको सबैभन्दा कान्छो स्कोरर बने।
त्यस बेलादेखि उसले ठूलो क्लबहरू विरूद्ध नाम कमाएको थियो - सबैभन्दा हालको हो म्यान युनाइटेडको २०१//२०१० कोओविड १ p १ महामारी फुटबल पुन: स्थापनापछि लीगको तेस्रो स्थानमा पुग्ने आशालाई धमिलो पार्दै। यो केवल केही समयको कुरा हो कि ऊ नियमित बन्नु अघि र त्यसपछि हामी ठूला क्लबहरू उसको हस्ताक्षरको लागि माग्दै देख्छौं। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
माइकल ओबाफेमी- प्रेमिका, पत्नी, एकल, विवाहित, बच्चाहरू?
फुटबल प्रतिभा समय संग आफ्नो प्रेम जीवन निजी राख्न मा ठूलो भएको छ। त्यस्तै माइकल ओबाफेमीको प्रेमिका को हो वा उनको श्रीमती छ भने भनेर भन्न गाह्रो छ।
खेलाडी जो आफ्नो महिला प्रेमिका वा पत्नी भन्न सकिन्छ कि कुनै पनि महिला संग देखिएको छ कि ऊ शीर्ष उडान फुटबल मा हुन सक्छ कि राम्रो हुन कडा प्रयास गरिरहेको छ। यद्यपि, हामीले धेरै महिलाको साथ उसको फोटोहरू देख्दैनौं, यो लामो हुन सक्दैन।
निस्सन्देह घरपरिवार हुनु पक्कै पनि आयरिश फुटबलरको जीवनको प्रेरणाको सब भन्दा ठूलो प्रेरणा शक्ति हो। यहाँ हामी तपाइँलाई माइकल ओबाफेमीका आमा बुबा र भाइबहिनीको बारेमा तथ्यहरू ल्याउँदछौं। हामी उसको पुर्खाहरूको बारेमा तथ्य पनि रूपरेखा लिनेछौं। अब सुरू गरौं।
माइकल ओबाफेमीका अभिभावकहरूको बारेमा:
पहिलो तर कम्तिमा होइन, धेरै ओबाफेमी माइकलको बुबाको बारेमा थाहा छ। जे होस्, हामीलाई थाहा छ कि उनकी आमा सुश्री बोलाजोको ओरेडिन उनको सबैभन्दा ठूलो फ्यान हुन्। उनी सँधै स्ट्राइकरका लागि थिइन र उनी १ Ireland बर्षको उमेरमा आयरल्याण्ड राष्ट्रिय टोलीको लागि सीनियर डेब्यू गर्न उनलाई भेट्न उपस्थित थिइन।
अरु के छ त? बोलाजोको ओरेडिनले उनको छोराको प्रत्येक खेलको लागि आउनुपर्ने कर्तव्य बनाउँदछ कि उहाँ बेन्चमा हुनुहुन्छ वा छैन।
माइकल ओबाफेमीका भाइबहिनीहरूको बारेमा:
अफोलाबी ओबाफेमी स्ट्राइकरको भाई हुन्। तिनीहरू सँगै फुटबल खेल खेलेर हुर्केका थिए र दुबै लिटन ओरिएन्ट युवा वर्गमा उनीहरूको क्यारियरले विभिन्न दिशाहरू लिनु भन्दा पहिले नै थियो। अफोलाबीको क्यारियर कम प्रख्यात छ। ऊ इस्टिमियन लिग प्रिमियर डिभिजनमा विing्गटेट र फिन्चलेमा उत्रनु भन्दा पहिले मुख्य तल्लो लिगमा खेल्थ्यो। यहाँ अफोलाबी ओबाफेमी छ।
माइकल ओबाफेमीको भाइ अफोलाबीलाई भेट्नुहोस्। 📷: Thejorter
माइकल ओबाफेमीका आफन्तहरूका बारे:
स्ट्राइकरको नजिकको परिवारबाट टाढा, उनका पुर्खाहरूको विवरण नाइजेरियामा पत्ता लगाउन सकिन्छ न कि आयरल्याण्डमा। यो विशेष गरी यसको रूपमा रहेको छ जुन यो उनको मातृ र बुवा हजुरबा हजुरआमासँग सम्बन्धित छ। थप रूपमा, ओबाफेमी का काका, काकी, काकी, भतिजा र भतिजीहरू।
प्रशिक्षण र यातना दिने रक्षकहरू बाहिरी "मीकाको" जीवनमा अगाडि बढौं। के तपाईंलाई थाहा छ जहाँ सबै साथीहरू, परिवार र टीमका साथीहरूले उसको व्यक्तित्व वर्णन गर्न आग्रह गर्दा सहमति हुन्छ?
तिनीहरू यस तथ्यलाई प्रमाणित गर्छन् कि ओबाफेमी एक मिल्ने व्यक्ति हो जो सृजनात्मक, लचिलो, भावनात्मक बौद्धिक र महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो जस्को राशि कर्क हो। ऊ पौडी खेल्न, यात्रा गर्न, चलचित्र हेर्न, परिवार र साथीहरूसँग अन्य चासो र रुचिहरूमा गुणस्तरीय समय बिताउन रुचाउँछ।
कसरी फुटबलर धन र उसले कसरी पैसा आफ्नो पिचमा खर्च गर्दछ भनेर जान्न पक्कै पनि तपाईंलाई उसको राम्रो तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
माइकल ओबाफेमीको नेट वर्थ:
आफ्नो बायो (२०२०) लेख्दा, के तपाईंलाई थाहा छ कि उसको वार्षिक तलब 2020००,००० युरो (600,000२525,000,००० पाउन्ड) हो? यसले माइकल ओबाफेमीको कुल सम्पत्ति १.1.7 मिलियन यूरो राख्छ। अब, हामी तपाइँलाई बताउँछौं कि कसरी स्ट्राइकरले आफ्नो पैसा बनाउँछ र खर्च गर्छ।
त्यहाँ कुनै रकेट विज्ञान छैन कसरी ओबाफेमीले आफ्नो सम्पत्तीलाई एकत्रित गरे किनभने फुटबल हामीलाई थाहा छ कि यो एक लोकप्रिय खेल हो। वास्तवमा, उसले एन्डोर्समेन्टबाट प्राप्त गरेको पैसा उसको विदेशी कारहरू राख्न र महँगो घर चलाउनको लागि पर्याप्त छ।
माइकल ओबाफेमी तथ्यहरू:
"मीका" (हाम्रो उपनाम) मा हाम्रो लेखन अपूर्ण हुनेछ यदि हामी यो हेडिंगको आवश्यकताहरू पूरा गर्दैनौं भने। त्यस्तै हामी तपाईलाई उसको पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दतको लागि स्ट्राइकरको बारेमा केहि तथ्यहरू हामी ल्याउँदछौं।
Afe अ of्कको ओबाफेमीसँग एकदम नराम्रो समग्र फिफा २०२० रेटिंग छ। यस्तो रेटिंग एक स्ट्राइकर को रूप मा उसको स्थिति राम्रो कुरा गर्दैन। प्रशंसकहरू निश्चित रूपमा विकाससँग खुशी छैनन् र उनको अपग्रेडको लागि कल गर्दै आएका छन्।
केवल थोरै व्यक्तिहरू यस तथ्यबाट सचेत छन् कि ओबाफेमीको जन्म वर्ष - २००० धेरै प्राविधिक घटनाहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो फेरिस व्हील वा अवलोकन व्हील (द लन्डन आई) २००० मा खोलिएको थियो। यो त्यही वर्ष थियो जुन डट कम बबल बर्स्ट र हजारौं डटकॉम्स बस्ट भयो।
ओबाफेमी एक क्रिस्टेन हुन्। वास्तवमा, उनको इन्स्टाग्राम पृष्ठको भ्रमणले तपाईंलाई विश्वस्त पार्दछ कि उहाँ एक विश्वासी हुनुहुन्छ, विशेष गरी जब तपाईंले स्ट्राइकरको कौशल सेट कम्पाइलेसनको भिडियो हेर्नुहुन्छ। भिडियोको क्याप्शन एक लोकप्रिय बाइबल पद छ जसमा यस्तो लेखिएको छ - "जसले मलाई शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ उहाँमार्फत म सबै कुरा गर्न सक्दछु।"
पुरा नाम माइकल ओलुवाडुरोटिमी ओबाफेमी
जन्म मिति जुलाई १62000 २ को आठौं दिन
जन्मस्थान आयरल्याण्डमा डब्लिन
प्ले गर्दै अगाडि
आमाबाबुले सुश्री बोलाजोको ओरेडिन (आमा)
भाई बहिनीहरू अफोलाबी ओबाफेमी (भाई)।
सोख पौंडी, यात्रा, चलचित्रहरू हेर्नुका साथै परिवार र साथीहरूसँग गुणस्तरीय समय बिताउनुहुन्छ
नेट मूल्य १. 1.7 मिलियन यूरो
तलब प्रतिवर्ष per००,००० युरो
माइकल ओबाफेमीको जीवनी मा यस insightful लेखन पढ्न को लागी धन्यवाद। हामीलाई कुनै श's्का छैन कि उसको जीवन कहानीले तपाईंलाई पाठक दिन्छ जुन तपाईंको जुनसुकै कुराको लागि जुनसुकै भावुक हो जुन तपाईंलाई दिन्छ। के तपाईं अवलोकनको क्रममा कुनै गलत वा अनुचित वाक्य पार गर्नुभयो? यदि हो भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा टिप्पणी बाकसमा सन्देश छोड्नुहोस्।